Tsy mbola tsapa ny fiantraikan'ny Brexit amin'ny dia eran-tany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Mbola tsy tsapa ny fiantraikan'ny Brexit amin'ny dia eran-tany
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • fivoriana • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Travel Wire News • Vaovao farany momba ny UK
Mbola tsy tsapa ny fiantraikan'ny Brexit amin'ny dia eran-tany
Amin'ny lafiny iray, ny indostria hatreto dia nanalavitra ny bala Brexit satria ny krizy Covid dia nanaloka sy nifehy ny vanim-potoanan'ny fialantsasatra voalohany tamin'ny vanim-potoana Brexit.
Ny fiantraikan'ny Brexit feno amin'ny indostrian'ny fitsangatsanganana manerantany dia tsy mbola tsapa, hoy ny fikarohana navoaka androany (Alatsinainy 1 Novambra) nataon'ny WTM London.
Maherin'ny 700 eo ho eo avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao no nandray anjara tamin'ny tatitra momba ny indostrian'ny WTM, ary nanontaniana raha nahatsapa fanerena manokana mifandraika amin'ny Brexit ny orinasany, hatreto.
Saika ny antsasany (45%) no nilaza fa tsy nahatsikaritra fahasamihafana tamin'ny 2021 noho ny Brexit. Amin'ireo izay niaiky ny fiantraikan'ny Brexit, ny valiny dia tena ratsy be. Ny 8% ihany no nanamarika fiatraikany tsara raha 24% no nanasongadina ny ratsy.
Ny fifandanjana, izay misolo tena ny iray amin'ny efatra (23%) amin'ny indostria, dia tsy azo antoka na tsy nahalala ny halehiben'ny Brexit izay nahatonga azy ireo tamin'ny 2021.
Niala tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny Vondrona Eoropeana ny UK, niaraka tamin'ny fifanarahana ara-barotra, tamin'ny faran'ny taona 2020. Ny lahatsoratra iray tao amin'ny The Financial Times tamin'ity fahavaratra ity dia nanasongadina ny fahasarotana amin'ny fanavahana ny fiantraikan'ny Brexit sy ny fiantraikan'ny COVID amin'ny UK plc sy amin'ny indostria manokana, nilaza fa “ ny sary momba ny varotra sy ny asa dia difotry ny fiantraikany ara-toekarena amin'ny areti-mifindra Covid-19. ”
Ny fifanarahana ara-barotra UK / EU dia efa niteraka fiovana ara-dalàna sasany izay hisy fiantraikany amin'ny fitsangatsanganana miditra sy mivoaka eo anelanelan'ny UK sy ireo firenena mpikambana sisa. Maro amin'ireo mpandraharaha finday lehibe indrindra any Angletera no nanambara ny fiafaran'ny fitsangantsanganana maimaim-poana ho an'ny mpandeha, araka ny notakian'ny lalàna fony i Angletera tao anatin'ny EU. Ity fanovana ity dia hanampy amin'ny saran'ny dia ho an'ny maro ary hanimba ny traikefa amin'ny toerana ho an'ny sasany.
Ny olana mety hitranga amin'ny daty lany amin'ny pasipaoro, ny fahazoan-dàlana mitondra fiara, ny fiantohana, ny haavon'ny mpiasa any amin'ny trano fandraisam-bahiny, ny zotra fifindra-monina any amin'ny seranam-piaramanidina, sy ny maro hafa, dia mety hitohy amin'ny taona ho avy, miaraka amin'ireo olana mifandraika amin'ny COVID-19.
Hisy ihany koa ny fiantraikan'ny Brexit/Covid mitambatra amin'ny orinasa sy ny mpanjifa. Ny fandraisana mpiasa dia ho hafa, raha mbola mijanona ny fahasarotana manodidina ny hetra miampita sisintany, ny famerenam-bola, ny fanatanterahana ary ny kaonty.